Date My Pet » Ny Fomba Hanatonana vehivavy raha saro-kenatra ianao?
Last nohavaozina: Nov. 21 2020 | 2 min namaky
Ianao sy ity lehilahy saro-kenatra drawback ny anao no nanery anao mba tsy hanambady izay taona maro.
Ve ny filazana etsy ambony hamaritana ny toe-javatra? No tadiavinao mora hampihatra ny didim, fa fomba mahomby mba hanesorana ny olana? Raha eny, ny fifanakalozan-kevitra eto ambany ity dia tokony hanampy anao.
Saro-kenatra, dia tsy maintsy manana finoana ny tenanao sy ny fara-tampon'ny lafin-javatra maro afaka manampy anao mba hahazoana izany finoana. Vakio ao ny mahalala inona marina no tokony atao.
Marina fa tsy misy afaka manova ny na ny bika aman'endriny. Vokatr'izany, ny olona mahay manao na inona na inona tsy ny fomba manintona mandinika, fa azo antoka fa afaka manao zavatra sasany mba hijery bebe kokoa.
Tsy mahagaga fa ianao hanatona ny tsy misy vehivavy noho ny menatra, fa zavatra iray tsy maintsy koa hahatakatra fa tsy misy olon-kafa afa-tsy ianao (ary angamba ny olona vitsivitsy tena akaiky anao) mahafantatra fa saro-kenatra.
Izany, dia afaka mora foana ny miezaka mahazo mifampikasokasoka amin'ny olona tsy famelana azy ireo hahatakatra fa ianao no iray amin'ireo voatahiry (vakio saro-kenatra) olona izay nijanona foana niala ankizivavy. Izany Ho mora kokoa ho anao ny hanafina ny bashfulness; Rehefa mitantana ny hanao nanarontsarona an'ilay izy io soa aman-tsara, dia tonga dia manomboka mahatsapa matoky kokoa.
Mba mijery ihany koa dia tsy maintsy matoky mifantoka kely teny an-dalana fiakanjonao. Misoroka ny fanaovana akanjo izay tsy hamela anareo hijoro eo amin'ny vahoaka. Aza, dia tsy tokony hanao pataloha fluorescent ireo sy mamirapiratra miloko lobaka mba ho hita ao amin'ny vahoaka. Mifidy ny akanjo fotsiny somary sensibly; raha manao akanjo tsara mijery anao, ianao dia tonga dia hihazona ny sain'ny vehivavy manodidina anao.
Manana tanjona azo
Moa ve ianao mikasa ny Woo malaza indrindra sy tovovavy tsara tarehy indrindra manodidina? Amin'ny maha-saro-kenatra ny olona, tokony tsy miezaka fa.
Marina fa ny saro-kenatra dia hampihena be indray mandeha manomboka mijery anao hatoky kokoa, nefa tsy midika izany fa efa ho marani-tsaina ampy tovovavy hitaona ny mafana indrindra manodidina.
Izay mety ho ankizivavy izay efa malaza, ary dia fantatra amin'ny maha-iray manintona indrindra tao amin'ny vondrona dia matetika natoky indrindra. Ny fahatokiana be ianao vao haingana nivory tsy ho ampy ny manatona toy izany tovovavy; hotorotoroiko ny fahatokiany anao ianao ny fotoana hanatona azy.
Izany, ny tanjona dia tokony ho ny fitadiavana izay mety amin'izy ankizivavy ny sehatra; foana ny vehivavy tsy manatona izay hampitahotra anao.
Aza menatra manao masony
Rehefa manatona olona iray farany, tsy nisalasala hanao masony. Vehivavy atao mora foana wooed ny olona mandinika ny masony tsy misy inhibition.
Izany no, na izany aza, angamba no asa sarotra indrindra ny olona saro-kenatra ve mety ho asaina hanao; fa, indray mandeha sakana voalohany i.e. nanatona ny vehivavy no niampita dia hanana ny hametraka ny ezaka tsara indrindra mba hiampita ny manaraka.
Ny fanaovana masony dia mora kokoa noho izay zavatra tena mihevitra ho manana ho. Rehefa avy masony, miezaka foana izany mandritra ny minitra vitsivitsy; ny voalohany dia azo antoka fa ho nervousness intsony.
Ny toro-hevitra etsy ambony dia tokony hanampy anao ho tonga avy amin'ny akora ny menatra. Hafa noho ny fanarahana ireo soso-kevitra, dia afaka miasa ihany koa amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fifampiresahana brushing ny vazivazy.
Top Tips ho Kiss Lehibe izay Mahatsiaro Just Perfect